Reer Burco halbaa seegay, Hawd-na halbaa seegay, wasaarada ciyaaraha halbaa seegay, Muuse Biixi halbaa seegay, Aniga iyo ragaan ku jirana halbaa na seegay.
Saturday November 21, 2020 - 13:00:32 in Wararka by Hargeisa Head OFFICE
Dhinaca kale, waxaan caad iyo ciiro toonna saarayn, in kala qaybsanaanta bulshada Somaliland gaadhay,
meeshii ugu xumayd muddo xileedkii madaxweyne Muuse Biixi. Adkaynta midnimada iyo wadajirka ummadda Somaliland, waa masuuliyad saaran dusha iyo dumada madaxweynaha. Nasiib darose, waxaa seegay madaxweynaha in uu ummadda uu odayga u yahay, ururiyo oo aanu kala irdhayn. Saaxiibkay madaxweyne Muuse Biixi waxaan leeyahay, mudane madaxweyne haw dhaqmin sidii Muusihii doraad ahaa, hogaamiye kooxeedka. Balse, u dhaqan sidii aad bulsho weynta Somaliland oo dhan aad hogaamiye u wada tahay, mid ku neceb iyo mid ku jecel, mid ku ogol iyo mid ku diidan, mid kuu codeeyay iyo mid kaa codeeyay intaba.
Aramida qaybsanaanta Burco iyo Bari ka jirtaa, waa mid ka gun dheer is qabqabsiga dhaliinyarada ciyaartooyda ah. Sidaa darteed, aniga iyo rag badan oo kale waxaa na seegay, in aanu gidaarka dhalanteedka ah, ee ka dhex samaysmay Burco iyo dhulka bari ka xiga aanu qaadno, oo qodaxda iyo qaniinka ka idlayno, qolqolka qaraabada iyo qoysaska wada dhashay.
Darbigii dhabta ahaa ee lagu kala qaybiyay magaalada Baarliin, dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida. 45 sano ka dib, rag baa dumiyay duhur cad, iyaga oo ay daawanayaan dalalkii danta mooday ee Maraykanka, Ingriiska, Faransiiska iyo ruushku. Haddaba, Waxaan leeyahay wixii rag u kaco, rabina aqbalo way rumoobaan.
w/q:Maxamuud Xashi Cabdi